Agaasimaha kubada cagta iyo madaxa fulinta kooxda Barcelona oo Doha kula kulmay Xavi… – Hagaag.com
Posted on 11 Janaayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Agaasimaha kubada cagta Barcelona Eric Abidal iyo madaxa fulinta ee Naadiga Oscar Grau ayaa kula kulmay caasimada Qatar ee Doha Xavi, ciyaaryahankii hore ee kooxda haatanna macalin u ah kooxda reer Qatar ee Al-Sadd, sida lagu sheegay warbixin Jimcihii.
Tani ayaa waxay timid saacado ka dib guuldaradii Barcelona ka soo gaartay Atletico Madrid oo 3-2 ku martay Khamiistii ee semi-finalka Spanish Super Cup, oo martigelisay Saudi Arabia garoonka ‘Radiant Jewel’ “Jowharadii dhalaaleysay”ee magaalada Jeddah. Guul daradan ayaa horseeday dhaleeceyn badan oo la kulmay macalinka Barcelona Ernesto Valverde.
Wargeyska “AS” ayaa soo wariyay in Abidal iyo Grau ay Xavi kula kulmeen Doha muddo labo saacadood ah, waxaana ay tilmaameen in ilo wareedyo ka tirsan maamulka kooxda Catalan ay xaqiijiyeen in kulanka horey u sii qorsheysnaa, si looga wada hadlo suurtagalnimada Xavi inuu qabto hoggaanka kooxda laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda.
Ilo wareedyada ayaa tilmaamay in kulanka Jimcihii aanu xiriir la laheyn ka saarida Barcelona ee Super Cup-ka.
Dhiniciisa, agaasimaha fulinta kooxda Al-Sadd Turki Al-Ali ayaa wuxuu qirtay in arrinta Xavi uu ku aadayo Barcelona ay tahay “mid caadi ah waqti kasta oo la filan karo maxaa yeelay waa naadigiisii hore.”
Horumarradan ayaa yimid si loo xaqiijiyo in maamulka kooxda ka dhisan gobolka Catalan ay go’aamineyso mustaqbalka Valverde, isla markaana aysan siin doonin fursad uu ku sii wado hogaaminta kooxda inta lagu jiro xilli ciyaareedka soo socda, iyada oo aan loo eegin natiijooyinka kooxda inta lagu jiro xilli ciyaareedkan.